इटहरीमा उपमेयर निःशुल्क आत्मनिर्भर तालिम – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
इटहरीमा उपमेयर निःशुल्क आत्मनिर्भर तालिम
इटहरी, जेठ १९ गते । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यवसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ इटहरी उपमहानगपालिकाले वडा नं. ४ मा एक महिने ‘उपमेयर निःशुल्क आत्मनिर्भर’ तालिम समापन भएको छ । वैशाख १४ देखि सुरु भएको सो तालिममा ‘मोति तथा क्रिस्टल’का गहना बनाउन सिकाईएको थियो । कार्यक्रममा २० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले महिलाहरुका लागि ‘उपमेयर निःशुल्क आत्मनिर्भर तालिम’ अन्तरर्गत वडा नम्वर ४ ले आयोजना गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका सबै वडाका महिलालाई दिइने सो तालिम अन्तर्गत पहिलो तालिम वडा नं. ४ मा दिइएको हो । सो तालिमको लागि प्रत्येक वडाको लागि नगरपालिकाले एक लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको वडा नं. ४ तालिम संयोजक लक्ष्मी चपाागाईले बताईन । उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताईन् । शिप क्षमता अभिवृद्धिसहित आत्मनिर्भर बनाउने महिलाका तालिमहरु छनौट गर्ने अधिकार सबै वडालाई दिइएको छ र वडाले छनौट गरेको अनुसारका तालिमहरुमा खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको चपागाईको भनाई छ ।
कार्यक्रम समापनमा सहभागी सबैलाई उपमहानगरपालिका उपमेयर लक्ष्मी गौतमले प्रमाणपत्र वितरण गरेकी थिइन् । प्रमाणपत्र वितरणपछि बोल्दै गौतमले महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउन सहयोग पुगोस भनेर प्रत्येक वडाका लागि वजेट छुट्याएको जानकारी दिइन् । उनले महिलाहरुलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भरता वनाउने लक्ष्य सहित सवै वडामा महिलाहरुका लागि विभिन्न खाले तालिमको व्यवस्था गरिएको समेत बताइन् ।
प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उपमेयर गौतम, वडाध्यक्ष चन्दप्रसाद भट्टराई, तालिमकी संयोजक वडा ४ की महिला सदस्य लक्ष्मी चापागाई लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
परिमार्जित ऐन–कानुनको छलफलसहित प्रशिक्षणमा जुटे एक नम्बर प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरु
पोखरेल र यादव उपप्रधानमन्त्री, २४ सदस्यीय मन्त्री परिषद्